Fampiharana fitantanana kaonty 3 tsara azonao ampiasaina amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Fampiharana kaonty tsara 3 azonao ampiasaina amin'ny Linux
Tsy dia matetika loatra no miresaka matetika momba ny fampiharana ara-bola amin'ny Linux ary maro ve no tsy mahalala ny fampiharana lehibe azo ampiasaina amin'ny Linux na tsy mahalala fa multiplatform izy ireo.
Tokony ho fantatrao fa Linux dia manana fampiharana ara-bola tena tsara Mihoatra noho ny fahaizan'izy ireo mandray an-tanana ny fizahana kaonty manokana na orinasa kely.
Izay ny malaza sy malaza amin'ny Linux dia GnuCash, HomeBank, KMyMoney ary Skrooge.
Raha ny lafiny endri-javatra sy ny fahombiazana dia tsara na mitovy amin'ny Microsoft Windows: MSMoney sy Quicken ihany izy ireo.
2 Home Bank
GnuCash dia programa ara-bola mandroso. Mpitantana fitantanam-bola manokana sy manokana izy. Izy io dia miaraka amin'ny làlan'ny fianarana hianarana.
Rafitra fitantanana indroa miditra indroa izy io. GnuCash dia manara-maso ny tetibola ary mitazona kaonty marobe amin'ny sokajy maro. Izy io dia manana tatitra feno mahazatra sy azo ekena.
GnuCash Izy io dia manana ny fisehon'ny fisoratana anarana. Ny GUI dia natao hanamorana ny fidirana sy ny fanarahana ny kaonty amin'ny banky, ny tahiry, ny vola miditra ary ny fandaniana. Na izany aza, mifarana eo ny fanamorana.
Tsy dia sarotra loatra ny mianatra mampiasa GnuCash. Natao ho tsotra sy mora ampiasaina izy io. Na izany aza, ny asany fototra dia mifototra amin'ny fitsipiky ny kaonty ofisialy.
Ho an'ny fitantanam-bolan'ny orinasa, GnuCash dia manolotra fiasa lehibe.
Ohatra, mitantana ny tatitra sy ny tabilao, ary koa ny fifanakalozana voalamina sy ny kajy ara-bola.
Raha manana orinasa kely ianao, ity app ity dia hanara-maso ny mpanjifanao, mpivarotra, asa, faktiora ary maro hafa. Avy amin'io fomba fijery io, GnuCash dia fonosam-panompoana feno.
Tsy dia misy zavatra tsy vitan'ny GNUCash. Mikarakara ny fanontana pirinty, ny trosa arahin'antoka sy ny indram-bola, ny vola amin'ny Internet sy ny banky ifanakalozana ary ny portfolio-stock / stock fund.
Raha ampitahaina amin'ny GnuCash, HomeBank dia mora kokoa amin'ny fampiasana rafi-kaonty manokana.
ny natao hamakafaka ny volanao manokana sy ny teti-bolanao amin'ny antsipiriany amin'ny fampiasana fitaovana fanivanana sy graphing mahery, ary ho an'ireo tanjona ireo dia fitaovana mety indrindra izy io.
Ahitana ny fahafaha-manafatra data malaky avy amin'ny Intuit Quicken, Microsoft Money, na rindrambaiko hafa.
Izy io koa dia mahatonga ny fanafarana banky amin'ny endrika OFX / QFX, QIF, CSV ho mora be.
Ankoatra izany, fampandehanan-droa manao dika mitovy mandritra ny fizotran'ny fanafarana sy mitana vola marobe. Manolotra fanavaozana an-tserasera momba ny karazana kaonty isan-karazany, toy ny banky, vola, fananana, carte de crédit ary andraikitra. Izy io koa dia manamora ny fandaharana ny fifanakalozana miverimberina.
HomeBank dia mihoatra ny programa kaonty fotsiny. Mampiasà sokajy sy tag mba handaminana fifanakalozana.
Ohatra, ity fampiharana ity dia mitantana kaonty fanamarinana sy tahiry marobe. Fanampin'izay, mandeha ho azy ny fanamarinana ny laharana fanamarinana sy ny sokajy / ny karama.
Home Bank afaka mandahatra ny fifanakalozana amin'ny safidy fandefasana aloha ary manamora ny famoronana fidirana amin'ny modely fifampiraharahana, fidirana sokajy misaraka ary fiasa famindrana anatiny.
Manolotra safidy teti-bola tsotra isam-bolana na isan-taona ihany koa izy io, ary manana tatitra mavitrika miaraka amin'ny tabilao.
Skrooge toa Quicken miaraka amin'ny sehatr'asan'ny mpampiasa sary an-tsary. Tsy dia mitovy amin'ny birao amin'ny banky izany. Mora kokoa ny mampiasa ny endrika. Ny firafitry ny takelaka dia manome endrika tsara kokoa an'i Skrooge.
Ny lahasa tsirairay, toy ny tatitra voasivana, ny fidirana anaty birao ankapobeny, ary ny dashboard, dia mijanona ho toy ny tsipika kiheba manerana ny tampon'ny varavarankely asehoy etsy ambany ny laharan'ny menio sy ny boaty.
Ity dia manokatra fisaka hatrany amin'ny takelaka iray raha hijery ny Dashboard, ny Income vs. Expense Report, ny sokajy indostrialy maro samihafa, sns.
Skrooge dia tsy lavitra aoriana raha ny endri-javatra no resahina. Ny iray amin'ireo tanjany dia ny fahaizana mahazo angona avy amina fampiharana vola hafa ka tsy mila mametraka azy avy hatrany ianao.
Manafatra endrikas QIF, QFX / OFX ary CSV. Izy io dia mahazaka ny fanondranana KMyMoney, Microsoft Money, GNUCash, Grisbi, HomeBank ary Money Manager EX.
Fomba hafa ampidiro ny tatitra an-tsary mandroso, kiheba manampy anao handamina ny asanao, manafoana / manavao tsy misy fetra na dia aorian'ny fanakatonana fisie sy ny sokajy sokajy tsy manam-petra aza.
Mahazo ihany koa ny sivana varotra eo noho eo sy ny tatitra, ny fanavaozana ny varotra betsaka, ny varotra voalahatra ary ny fahaizana manara-maso ny vola aloa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fampiharana kaonty tsara 3 azonao ampiasaina amin'ny Linux
Mpiambina solosaina dia hoy izy:
Fanangonana mahaliana, David
Manana ny fahatsapako aho fa ny ankamaroany dia mifantoka amin'ny kaonty "an-trano" an'ny fianakaviana iray (angamba tsy dia mahazatra ny GNUCash)
Tamin'ny androny, nanome antsika ny namana AdePlus a lahatsoratra momba ny Kaonty Keme, fampiharana izay mbola mahaliana ho an'ireo orinasa manana habe iray.
Nota: Raha tsy hitanao fa mety ny mampifandray amin'ny lahatsoratra ivelany ao anaty hevitra, dia tiako izany fa voafafa izany.
Salu2 ary misaotra tamin'ny fandraisana anjara tsy tapaka ho an'ny Community?
Mamaly ny IT amin'ny Adidy
dj0k3 dia hoy izy:
Misy programa antsoina hoe Accounting Manager. Tsy loharanom-baovao misokatra fa tena mandeha tsara. Maimaimpoana (ny biraon'ny birao), toa maoderina be izy ity, manana forum izy ireo ahafahanao manontany, eny, manana modules tsara be dia be izy io. Tsy fantatro ny fomba feno anaovana azy raha ampitahaina amin'ny GNU Cash, fa farafaharatsiny niasa tsara ho ahy izy io ary efa an-taonako no nampiasaiko azy.
Mamaly an'i dj0k3
gasparfm dia hoy izy:
Mpankafy an'i Grisbi aho. Nampiasako azy io nandritra ny taona maro ho an'ny volako manokana. Manana firaketana an-tsoratra nandritra ny 10 taona aho ary tsy nanome olana ahy izany. Marina fa rehefa mamorona tatitra dia mety hanasarotra zavatra kely ary tsy hamela anao hanao sary, farafaharatsiny avy amin'ilay programa mihitsy. Saingy mampiadana ny fidiran'ny angona sy ny fanaraha-maso ny kaontinao.
Valiny amin'ny gasparfm
sivana-ivelany-aquarium dia hoy izy:
Tiako i Grisbi, na dia mbola sarotra amiko aza ny mahatakatra azy tanteraka. Ny safidy tsara hafa dia ny KMyMoney sy GnuCash!
Valio ny sivana-ivelany-aquarium
AppImage dia manana fivarotana fampiharana "AppImageHub"
Manjaro Linux 2019 Guide fametrahana